कसरी थाहा पाउने ‘हार्ट अट्याक’ र ‘प्यानिक अट्याक’?? - Akhabaronline
कसरी थाहा पाउने ‘हार्ट अट्याक’ र ‘प्यानिक अट्याक’??
एक्कासी तपाईंको मुटुको धड्कन बढ्न थाल्यो र छातीमा पीडा महसुस गर्नुभयो अनि सास लिन पनि कठिन हुँदै गयो।
सामान्यतया हार्ट अट्याक र प्यानिक अट्याकको सुरुवाती लक्षण उस्तै हुन्छन्।
सहरी जीवनशैली, अस्वस्थ खानेकुरा, धुमपान तथा मदिराको सेवन र शारिरीक व्यायामको कमी लगायतका कारण धेरै मानिसले मुटुसम्बन्धी समस्या झेलिरहेको पाइन्छ।
अनि तीव्र प्रतिस्पर्धा, नकारात्मक सोंच, मानिसको बढ्दो आकांक्षालगायतका कारण धेरै मानिस विभिन्न किसिमका मानसिक रोगको शिकार भइरहेका छन् जसमध्ये प्यानिक अट्याक पनि एक हो।
विल्कुलै भिन्न कारणले प्यानिक अट्याक तथा हार्ट अट्याक आउने भए पनि सुरुवाती लक्षण हेर्दा यी दुइबीच भिन्नतालाई तत्कालै छुट्याउन सकिँदैन।
गलत समयमा स्ट्रेसहर्मोन (तनाव वा संकटपूर्ण अवस्थामा दिमागमा उत्पादन हुने रसायन) श्रृजना हुँदा प्यानिक अट्याक भएर मानिसले मुटुको ढुकढुकी बढेको, छाती दुखेको वा भारी भएको तथा सास फेर्न गाह्रो भएको लगायतको समस्या महसुस गर्दछन्।
उता मुटुको धमनीमा अवरोध आइ हृदयले राम्रोसँग शरीरभरि रक्तसञ्चार गर्न नसक्दा हार्ट अट्याक हुने गर्दछ जसको लक्षण पनि प्यानिक अट्याककै जस्तो हुन्छ।
यी दुईबीचको सबैभन्दा ठूलो भिन्नता प्यानिक अट्याक प्रायःजसो आरामको अवस्थामा आउने गर्दछ भने, हार्ट अट्याक सामान्य वा कठिन शारिरीक परिश्रम गरिरहेको अवस्थामा आउँछ जस्तै खेलकुदका बेला, भ¥याङ्ग चढ्दा लगायत।
अर्को भिन्नता भनेको यिनीहरूको अवधी पनि हो।
प्यानिक अट्याक सामान्यता १० देखि २० मिनेटभित्र आफै कम हुँदै जान्छ। अनि मानिस सामान्य अवस्थामा फर्कनसक्छ तर हार्ट अट्याकका लक्षणहरू बिस्तारै तीब्र हुन्छ र समयमै उपचार नपाएको अवस्थामा मानिसको मृत्यु पनि हुनसक्छ।
हार्ट अट्याक भएका ब्यक्तिहरूले बान्ता आउला जस्तो, खोकी लाग्ने लगायत महसुस गर्दछन्। यसैगरी हार्ट अट्याकमा छातीको दुखाइ क्रमश काँध, कुइना तथा बंगारातर्फ सर्छ।
तर प्यानिक अट्याकमा भने यस्ता लक्षण देखिँदैन। बरु यस्तो अट्याक हुँदा मानिसले कान, पैताला वा तालु तात्ने, पेटमा दबाब हुने तथा स्मृती एवं दिमाग कमजोर भएको महसुस गर्छन्।
यौन सम्पर्क गर्नु अगाडि यस्तो गर्नुभयो भने महिला सन्तुष्ट हुन्छन्
दलित समुदाय लाई सबै तहको शिक्षा निशुल्क
खाली पेट चिया पिउनु उपयुक्त हो त ?
शरीरमा रगत कसरी बढाउने ?
डायबिटीज’ का बिरामीले गर्नुहुँदैन यस्ता गल्ती
लकडाउनमा के, कति र कसरी खाने ?
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका कर्मचारी तथा शिक्षकले मागे ४ बर्षको हिसाब, नदिए अख्तियार जाने
नृत्य निर्देशक संघ नेपाल (डिडान) भक्तपुर शाखाको सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
बरिष्ठ कलाकार स्व. जयनन्द लामाको अन्तिम अभिनित चलचित्र ‘‘दार्बुङ’ असार ३२ गते राष्ट्रिय नाचघरमा प्रदर्शन हुने
फेसियल हाउसको “असार १५ को रोपाँई थिम” मा फोटो शुट
नेविसँघ सिटिइभिटी संयोजकका नाममा पैसा उठाउदै विद्यार्थी नेताहरु
एनआईसी एशियाको मोबाइल बैंकिङ्ग एप ओम्नी च्यानलमा स्तरोन्नति
बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सिसिटिभी फुटेज गायव अर्थमन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी जवाफ ‘फुटेज डिलेट भयो’
रवि लामिछानेको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ आयोगमा दर्ता
एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङ नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा निःशुल्क
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नम्बर १३६ /०७५/०७६
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर २६४५
अखबार मिडिया प्रा. लि.
अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक:
छिरिङ म्युङ्ग्युर शेर्पा
© Akhabar Media Pvt Ltd. -2021 All rights reserved.